Fampivoarana ny vokatra - Chapman Technology Co., Ltd.
amin'ny Chapman Maker, azonay ny fifaninanana tarehin'ilay mpiara-miasa aminay amin'ny indostria maro. Ny mpiara-miasa aminay dia nanisa ny ekipanay injeniera efa za-draharaha efa ho dimy taona izao hanohana ny tombony azony amin'ny fifaninanana.
Mifantoka amin'ny fifandraisana tsy tapaka izahay mandritra ny dingana manontolo, ao anatin'izany ny endrika famolavolana, hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fampiharana ny mpiara-miasa amintsika. Mpitantana Program manokana natokana ho an'ny tetikasa tsirairay. Amin'ny alàlan'ny hevitry ny mpiara-miasa dia afaka manome ny endrika sy ny fampandrosoana ny firafitry ny vokatra sy ny programa fampiharana ny ekipanay teknika. Izy io dia miantoka ny mpiara-miombon'antoka amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny kalitao, amin'ny fahombiazany ary amin'ny fahombiazan'ny vidiny ho an'ny singa tsirairay vita.
Mino ny ekipanay fa zava-dehibe ny dingana rehetra amin'ny fampandrosoana sy famokarana fampiharana. Miara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miasa aminay izahay hiantohana ny fahombiazana isaky ny dingana. Ny fiheverantsika ny fampandrosoana ny vokatra, ny famolavolana ny famokarana sy ny fampiasana ny bobongolo mikoriana handinika sy hanao tolo-kevitra momba ny famolavolana dia manome ny mpiara-miombon'antoka amintsika amin'ny fifaninanana hatramin'ny voalohany.
Na inona na inona dingana misy anao mandritra ny fampivoarana ny vokatra, ny ekipanay dia vonona hanampy sy hanao tolo-kevitra ho an'ny volavolanao hampihenana ny vidin'ny famolavolana sy ny asa fanompoana faharoa.
Niara-niasa tamin'ny mpanjifa izahay mba hampivelatra ny vokatra amin'ireto sehatra manaraka ireto:
1. Fanatanjahan-tena sy ety ivelany
2. Mivezivezy / Azo idirana
3. Fahasalamana / Fahasalamana
4. Fitaovana indostrialy
5. Masinina indostrialy
Dingana voalohany: Hevitra - Ny tetik'asa dia manomboka amin'ny hevitrao momba ny vokatra iray. Avelao izahay hanampy anao hamaritra ny fampiasa ilaina ary haka sary an-tsaina ny fomba fiasa izay mety indrindra amin'ny tsenanao kendrena. Hanao benchmark ihany koa izahay ary handinika ny fananana ara-tsaina efa misy.
Dingana faharoa ： Fanadihadiana amin'ny antsipiriany- Na dia mamaritra ny ID momba ny vokatra vaovao aza izahay, ny ekipa mpivarotra anay dia mila manao fikarohana an-tsena mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fametrahana ny tsena ankehitriny sy ny tinady. Araka ny valin'ny fanadihadianay ny tsena dia hanatsara sy hanatsara ny firafitry ny vokatra sy ny asany ary hamela ny vokatray hiditra haingana eny an-tsena izahay.
Dingana fahatelo ：Volavola - Mba hanaovana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny maodelin'ny orinasanao dia mila mampiasa metodolojika ho an'ny famokarana (DFM) izahay mba hahomby araka izay azo atao ny famokarana. Ny konsep dia misy endrika ao amin'ny programa fanaingoana 3D antsika, ary afaka manapa-kevitra momba ny endri-javatra, ny form form ary ny fitaovana izahay. Izahay dia hanaiky ny làlana hendry indrindra mankany amin'ny vokatrao alohan'ny handrosoana amin'ny dingana fananganana.
Dingana fahefatra ：Prototype - Ao amin'ny fotodrafitrasa feno fitaovana, afaka manapaka, manodina, mamorona, 3D pirinty, tariby ary fandaharana ny ampahany sy ny singa tsirairay alohan'ny hametrahana ny prototype-nao. Mety hiverina indray ny dingana prototyping satria dinihina sy voasedra ireo endrika samihafa.
Dingana fahadimy ：Famokarana - Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fanamboarana, ny mandeha ho azy ary ny fizotran'ny indostrialy, izahay dia manampy anao hamolavola ny vokatrao amin'ny famolavolana saina mba hitrandrahana tombony azo amin'ny tahiry. Ny fahafaha-manao an-trano dia ahafahantsika manatanteraka hazakazaka famokarana sasany.
Dingana fahenina ：Fanaterana - Ny taranaka voalohany amin'ny vokatrao dia vonona amin'ny famokarana sy ny tsena. Hanana fonosana famolavolana feno, prototypes ary mety ho tahiry kely ianao. Hanana ny fanohananay koa ianao rehefa mandroso amin'ny dingana manaraka.
Zava-dehibe ny fanombanana ny raharaham-barotra sy ny "soatoavina fandraharahana" rehefa mamorona vokatra. Ny ekipanay dia hanampy anao amin'ny tsiambaratelo hanampy anao hanombatombana haingana ny fahafaha-manao sy hitarika anao amin'ny famakafakana ny olana tadiavin'ny olanao hamahana.